Soo dejisan G Data Antivirus 25.5.5.43 – Vessoft
WindowsAmnigaAntivirusesG Data Antivirus
Bogga rasmiga ah: G Data Antivirus
Macluumaadka – software kaas oo taageera hababka nabadgelyada caqli ahaaneed iyo qaababka si fiican loo abaabulo ee ammaanka kombiyuuterka. Software wuxuu bixiyaa heer fiican oo ka hortag ah fayrasyo kala duwan, rootkits, ransomware, spyware iyo qalabka waxyeellada leh oo ay ugu mahadcelinayaan tiknoolajiyadaha casriga ah ee ogaanaya walxaha khatarta ah calaamadaha habdhaqanka iyo saxiixyada. G Macluumaadka Antivirus wuxuu leeyahay noocyo badan oo isku-baadiyo fayruska, sida jeegga kombiyuutarka ee guud, baarista goobaha khaaska ah, xusuusta iyo jeegga autorun, jadwalka jadwalka ah, jeegga saxaafka laga saari karo. G Data Antivirus wuxuu xambaarsanyahay khatarta khatarta ee shabakada shabakadda waxayna ogaadaan bogagga khayaanada ee isku dayaya in ay xadaan macluumaadka lacag bixinta khaaska ah. Software wuxuu hubiyaa emailka xayawaannada xaasidnimada ah iyo waxyaalaha laga shakiyo. G Macluumaadka Antivirus sidoo kale waxaa ku jira habka ilaalinta ee ka faa’iidaysta kaas oo ka ilaaliya kambiyuutarka ka hortagga u nugul nabadgelyada ee barnaamijka loo rakibay.
Heerka sare ee hanjabaadda
Ilaalinta kalluumeysiga, keyloggers, ransomware
Hubi shabakadda internetka iyo bangiga internetka
Soo dejisan G Data Antivirus
Faallo ku saabsan G Data Antivirus
G Data Antivirus Xirfadaha la xiriira